5 uru nke Adgbakwunye Infographic na saịtị gị | Martech Zone
Tuesday, May 14, 2013 Tọzdee, Eprel 27, 2017 Jayson DeMers
Ihe onyonyo na vidiyo na-akpali ndị mmadụ, ọ bụ ihe dịka oge infographics nwetara nkwanye ugwu ka ha kwesịrị. Ha abughi ihe obula; ha nwere ihe ọ ga - ewe iji gwọọ nke ọma yana ịmatakwu akara ngosi, akara mmekọrịta, na mgbasa ozi. Infographics na-etinye ntụpọ dị ukwuu n’ihe onyonyo ma nwee ike iji ya gosipụta otu isi wee kpokọta eziokwu ọnụ. Ihe na - akwalite uru ha n’eziokwu bụ na a na - ekekọrịta ha n’ụzọ dị mfe na saịtị ntanetị, na - enye ha ikike ịba oria.
Azụmaahịa ọ bụla nwere ike irite uru site na iji infographics, mana ọ bụrụ na emechara ya nke ọma. Dị nnọọ ka ọdịnaya dị elu, infographics kwesịkwara ịbụ nke kachasị mma ma baa uru nye ndị na-ekiri Ọ bụrụ na ị nọ na ngere banyere ịmalite mkpọsa ozi infographic, lee uru 5 kachasị dị na ịme nke a.
Nkwurịta Okwu Ka Mma - Onye obula nwere uzo nkwurita okwu di iche, otutu mmadu ole na ole (karisie Millenials) nwere onyonyo. A na-enweta nkwukọrịta ka mma site na iji ihe ọmụma eme ihe n'ihi na etinyela ozi ahụ na digestable, onyonyo dị mfe nghọta karịa blog ma ọ bụ isiokwu. Nke a na-amasị ndị mmadụ bụ ndị na-amụ ihe ọhụụ, na-enye nkọwa nghọta buru ibu ma buru ibu.
Mbugharị weebụsaịtị - Dika ebiputara ihe omuma gi ma malite ime ka o gabiga na nkwado ya, ndi nkwusa ndi ozo g’eme ka ndi mmadu mara ya. Mgbe ndị nkwusa ndị ọzọ rụtụrụ aka na ya, ị ga-ahụ ahịa ntụgharị aka sitere n'aka ndị nkwusa a. Infographics na-ebu SEO uru nke na-enyere aka ịbawanye okporo ụzọ, nke a na-atụle n'okpuru.
Ọganihu Ọchụchọ Injin Ọchụchọ - Infographics meziwanye ihe njin njin nke mbu site n’inweta njikọ inbound. Mgbe ebipụtara nnukwu ozi ederede, ọ ga-adọta njikọ ka ọ na-ekekọrịta gafee nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta yana agbakwunye n'ime isiokwu ndị ọzọ. N'aka nke ya, ka ebipụtara isiokwu ndị ahụ, ha ga-adọta azịza ndị na-agụ na mgbasa ozi mgbasa ozi, na-ebute akara ngosi mmekọrịta nke ukwuu mmetụta search engine rankings.
Gere ndị na-ege ntị ntị - Dika edeputara ma gosiputa ihe omuma gi na ubochi, izu, na onwa ndi n’asoro ya, igha adiri ndi mmadu ohuru ndi nwere ahia gi. Nke a agaghị enyere aka ịchụpụ okporo ụzọ ezubere iche na weebụsaịtị gị, na-ebute ọnụọgụ ntụgharị dị elu, kamakwa na-enye aka ịchekwa ọwa mgbasa ozi gị na ndị ahịa nwere ike ịba uru n'ọdịnihu.
Mmata Amara & Iguzosi Ike n'Ihe - Dika ebiputara ihe omuma ihe gi, ihe ndi g’eme ka gi na ndi mmadu biputara ya ga - ejiko ya, o gha abia na ndi ahia gi ghari ikwenye ya, kamakwa ya na igwe na - acho ya (mee ka uzo inyocha igwe na ebe nrụọrụ weebụ gi ka mma) Mgbasa ozi mgbasa ozi nke infographic gị mere ga-eme ka mmetụta a sie ike. Dika ndi ahia na ndi ahia huru ihe omuma gi nke edeputara na nke kwesiri ntukwasi obi, ebe ha kwenyesiri ike, igha enweta obi ha na ntukwasi obi.
Infographics bụ a ngwá ọrụ dị ike na ụlọ ahịa ịntanetị gị. Gbalia ileba anya n'inwe naanị ihe omuma di elu ka ighara igha ika gi, i nwere uzo ahia ahia.
Tags: akụkọ ihe mere eme nke infographicsInfographics Ahịaonline ahịa